बिष्णु भगवानको उपासना गर्ने पर्व हरिशयनी एकादशी किन मनाइन्छ ? यस्तो छ महत्व - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
बिष्णु भगवानको उपासना गर्ने पर्व हरिशयनी एकादशी किन मनाइन्छ ? यस्तो छ महत्व
काठमाडौं । आषाढ मासको शुक्ल पक्षको एकादशी तिथिलाई ‘हरिशयनी’ एकादशी भन्ने गरिन्छ। ‘हरि’ भन्नाले भगवान् विष्णुलाई बुझिन्छ। ‘शयन’ को अर्थ सुत्नु हो। आषाढ शुक्ल पक्षको एकादशी तिथिमा भगवान् श्रीहरि क्षीरसागरमा गई शेषनागमाथि शयन गर्नुहुने भएकाले यस दिनलाई हरिशयनी एकादशी भनिएको हो।
नेपालले कुबेतलाई ८३ रनले हरायो
भदौ १५ । काठमाडौँ, उन्नाइस (यु–१९) वर्षमुनिको एसिसी प्रिमियर लिग क्रिकेटमा नेपालले कुबेतलाई ८३ रनले पराजित […]
संविधान लेखन यसरी हुँदैछ
काठमाडौँ, सविधान मस्यौदा समिति मातहतको कार्यदलले संवैधानिक राजनीतिक सम्वाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदनको […]
‘लोकमानसिंह कार्की प्रधानमन्त्री बन्न खोजे’
रुकुम, १७ कात्तिक । ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमानसिंह […]
वाइडबडी खरिद प्रकरणः गृहसचिव राईले पाए ‘क्लिन चिट’
काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले तत्कालीन पर्यटन सचिव तथा हालका गृह सचिव प्रेम कुमार राईलाई वाइडबडी जहाज […]
पुर्व युबराज पारस थाईल्याण्डमा पुन पक्राउ
कात्तिक २९, काठमाडौँ- लागु औषधको कारोबारको आरोपमा पक्राउ परि ३० लाख धरौटीमा रिहा भएका पूर्वयुवराज पारस […]
काठमाडाैँ । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिले जोखिमयुक्त समूहमा परेका भूकम्प पीडितलाई थप ५० हजार […]